दुई स्काभेटरमा आगजनी : अपराधीको खोजि तिब्र !! | शुभ दिन
दुई स्काभेटरमा आगजनी : अपराधीको खोजि तिब्र !!
अरुण गाउँपालिका –७ जरायोटार लेगुवाघाटस्थित फेदी बजारमा रहेको क्रसर उद्योगमा रहेको स्काभेटरमा सोमबार राती आगजनी भएको छ । भीम पौडेलको स्वामित्वमा रहेको स्काभेटर आगजनी पछि पूर्णरुपमा जलेर नष्ट भएको छ ।
सोमबार राती करिब साढे ११ बजेतिर स्काभेटरमा आगालागी हुनासाथ जरायोटार प्रहरी चौकीबाट खटाइएको प्रहरी टोलीले घटनास्थलमा खोज्दा कोही नभेटिएको प्रहरीले जनाएको छ । कसले आगजनी गरेको हो भन्ने पुष्टि नभएको र घटनाको विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय भोजपुरका प्रहरी नीरिक्षक चरित्रविक्रम कार्कीले बताए ।
यता पौवादुम्मा गाउँपालिका २, तिवारीभञ्जाङमा पनि सोमबार रातीनै सडक निर्माणका लागि राखिएको स्काभेटरमा अज्ञात समुहले आगजनी गरेको छ । तिवारीभञ्जाङमा रहेको कन्काइ कन्ट्रसनको स्काभेटरमा आगजनी भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ ।
दुवै घटना कसले गरायो भन्ने पत्ता नलागेकाले थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ ।